COVID-19 နှင့် Quarantine, Isolation, Social Distancing ဆိုသည်မှာ . . . – Good Health Journal
COVID-19 နှင့် Quarantine, Isolation, Social Distancing ဆိုသည်မှာ . . .
COVID-19 ဆိုတာက နိုဗယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ဖြစ်တဲ့ရောဂါဖြစ်ပါတယ်။CO ဆိုတာက ကိုရိုနာ၊ VI ဆိုတာက ဗိုင်းရပ်စ်ကို ရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပြီး D-19 ဆိုတာကတော့ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ မှာ စတင်တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက် WHO က COVID-19 ဆိုတဲ့ နာမည်ကို ရွေးချယ်လိုက်တာပါ။ WHO ကပဲ နိုဗယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကို SARS-CoV-2 လို့ တရားဝင်ထုတ်ပြန်လိုက်တာက ဒီဗိုင်းရပ်စ် က ၂၀၀၃ ခုနှစ် SARS ရောဂါပျံ့နှံ့နေစဉ်မှာ ရောဂါဖြစ်စေတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး SARS-CoV နဲ့ မျိုးရိုးဗီဇ ချင်း ဆင်တူနေတာကြောင့်ပါ။ ဒါပေမဲ့ တစ်ထေရာတည်း ချွတ်စွပ်မတူဘူးလို့တော့ ဆိုပါတယ်။
ယနေ့အချိန်အထိ ကမ္ဘာတစ်လွှား နိုင်ငံပေါင်း ၁၇၃ နိုင်ငံက ဒီ COVID-19 ရောဂါကူးစက် ပြန့်ပွားနေချိန်မှာ ဒီရောဂါအတွက် နိုင်ငံအတော်များများက ရောဂါကူးစက်နှုန်းလျော့ကျဖို့အတွက် Quarantine, Isolation နဲ့ Social Distancing နည်းလမ်းတွေကို အသုံးပြုနေကြပါတယ်။
► Quarantine ဆိုတာ က သီးသန့်ခွဲထားတာကို ခေါ်ပြီး ကူးစက်ရောဂါတွေ ပျံ့နှံ့မှုကို ရပ်တန့်အောင် အသုံးပြုတာပါ။ Quarantine ကို ရောဂါလက္ခဏာမပြပေမယ့် ရောဂါရှိသူတွေနဲ့ ထိတွေ့မှုများခဲ့တဲ့ လူတစ်ယောက် ဒါမှမဟုတ် အုပ်စုတစ်စုအတွက် အသုံးပြုတာပါ။ ရောဂါအဖြစ်များတဲ့နိုင်ငံကနေ ပြန် လာတဲ့သူတွေကိုလည်း Quarantine လုပ်ပါတယ်။ ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရနေသူတစ်ယောက်က လက္ခဏာမပြသေးပေမယ့် တခြားသူကို ကူးစက်နိုင်တာမို့ လူတွေနဲ့ သီးသန့်ခွဲထားတာပါ။ Quarantine ကို အောက်ပါအခြေအနေတွေမှာ အသုံးပြုပါတယ်။
♦ Outbreak – ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားစဉ်
♦ Epidemics – ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားစဉ်
Outbreak နဲ့ ဆင်တူပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကူးစက်ခံရသူတွေ ပိုမိုကျယ်ပြန့်လာတဲ့အခြေအနေပါ။
♦ Pandemics – ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ
ကမ္ဘာအနှံ့မှာ ကူးစက်ခံရသူတွေလည်း ပိုမိုပြီး များပြားလာတဲ့အခြေအနေပါ။
► Isolation ဆိုတာ က သီးသန့် တစ်ယောက်တည်းခွဲထားတာပဲ ဖြစ်ပေမယ့် ရောဂါဖြစ်ပွားနေသူနဲ့ ရောဂါဖြစ်နေတယ်လို့ သံသယရှိသူတွေအတွက် အသုံးပြုတာပါ။ ဒီလိုလူနာမျိုးတွေကို သီးသန့်ခွဲထားမှ သူ့ဆီက ရောဂါပိုးတွေက တခြားကျန်းမာနေတဲ့သူတွေဆီ မကူးစက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
► Social Distancingဆိုတာ က လူစုလူဝေးနဲ့ မနေတာကို ဆိုလိုတာပါ။
♦ ကုန်တိုက်တွေ၊ ရုပ်ရှင်ရုံ၊ ဘုရားပွဲ၊ အားက စားခန်းမတွေလိုမျိုး နေရာတွေမှာ လူဦးရေက ၂၅ ယောက်ထက် ပိုပြီးရှိမနေသင့်ပါဘူး။
♦ သင်ဟာ လူတွေကြားမှာ ရှိနေရမယ်ဆို ရင်လည်း တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အနည်း ဆုံး ခြောက်ပေခွာနေရပါမယ်။
♦ မိမိအလုပ်လုပ်တဲ့ရုံး/အလုပ်ဌာနလိုနေရာတွေ၊ ဆေးရုံ/ဆေးခန်းတွေမှာ ဆရာဝန်နဲ့ ပြသဖို့ စောင့်ဆိုင်းစဉ်မှာလည်း တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အနည်းဆုံး သုံးပေ (ဖြစ်နိုင်ရင် ခြောက်ပေ) ခွာနေသင့်ပါတယ်။
♦ တန်းစီတာလိုမျိုး၊ ဓာတ်လှေကားစီးတာ လိုမျိုး၊ စားသောက်ဆိုင်လို နေရာမျိုးနေရာတွေ မှာ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ခပ်ခွာခွာနေပါ။
♦ ဘတ်စကား/ရထားလို လူအများအသုံးပြု နေတဲ့ယာဉ်တွေစီးတဲ့အခါမှာလည်း ခပ်ခွာခွာ နေဖို့ မဖြစ်နိုင်တာကြောင့် မိမိရဲ့ အလုပ်၊ ရုံး ဌာနတွေမှာ အရေးတကြီး မရှိမဖြစ်ဝန်ထမ်းတွေ ကလွဲပြီး ကျန်ဝန်ထမ်းတွေကို အလှည့်ကျ အ လုပ်ဆင်းခိုင်းပါ။
♦ ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်၊ လက်သည်းပြင်ဆိုင်၊ အလှပြင်ဆိုင်နဲ့ အနှိပ်ခန်းမတွေလိုနေရာမျိုးမှာ တစ်ယောက် နဲ့တစ်ယောက် သုံးပေ ဒါမှမဟုတ် ခြောက်ပေ ခွာနေဖို့ မဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက် အဲဒီနေရာတွေကို မသွားတာ အကောင်းဆုံးပါ။
♦ တစ်အိမ်နဲ့တစ်အိမ် အလည်အပတ်သွား တာ၊ ညအိပ်ညနေ နေထိုင်တာ၊ မွေးနေ့ပွဲ ဒါမှ မဟုတ် Date လုပ်တာတွေကိုလည်း ရှောင် ကြဉ်ပါ။
♦ ဘိုးဘွားရိပ်သာ၊ မသန်စွမ်းဂေဟာနဲ့ မိဘ မဲ့ဂေဟာတွေကိုလည်း Social Distancing ပြုလုပ်နေချိန်မှာ မသွားတာ အကောင်းဆုံးပါ။ အသက်ကြီး သူတွေက COVID-19 ကို ခံနိုင်ရည်စွမ်းမရှိတဲ့အတွက် အသက်အန္တရာယ်အလွန်များတာကြောင့်ပါ။
♦ လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ချင်ရင် အားကစားခန်းမသွားမယ့်အစား ပန်းခြံထဲမှာ လမ်းလျှောက်တာ၊ စက် ဘီးစီးတာလိုမျိုး ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အရင်တုန်းကလို လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေကျ မိတ်ဆွေတွေ အများကြီးနဲ့ ပူးပူးကပ်ကပ် လမ်းလျှောက်တာ၊ စားသောက်ဆိုင်ထိုင်တာမျိုးတွေတော့ မပြုလုပ်ပါနဲ့။
Ref : my.clevelandclinic.org, healthline, webmd.com, health.com
အီတလီနိုင်ငံက ကုန်တိုက်တစ်ခုမှာ စျေးဝယ်ဖို့ တန်းစီနေတဲ့ပုံပါ။ ဆိုင် ထဲမှာရှိသူတစ်ယောက်ထွက်ပြီးမှ နောက်တစ်ယောက်ဝင်ရတာပါ။
ရုံးခန်းတွင်းက ဝန်ထမ်းတွေ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် သုံးပေကျော်အကွာမှာ ရှိနေရတဲ့ပုံစံပါ။
စင်ကာပူက စားသောက်ဆိုင်ခန်းအတွင်းမှာ social Distancing လုပ်ဖို့ မထိုင်ရတဲ့ခုံတွေကို အနီရောင်နဲ့ အစင်းနဲ့ တားထားတာပါ။
Categories:	Article, WUHAN-CORONA-COVID 19	/ by Good Health Admin March 19, 2020